Izindaba - Mayelana ne-SITC
I-Simply (Weifang) International Trade Co., Ltd (SITC) iyinkampani yeqembu egxile kakhulu ekuhwebeni okungenisa nokuthekelisa. I-SITC yasungulwa ngokuhlanganyela ngabakhiqizi abaningi bemishini yobunjiniyela. Imikhiqizo yayo ifaka ama-Skid steer loaders, ama-Small Loader, ama-Backhoe Loader, ama-Excavators, ama-Roller Road, ama-Mixers, amaloli we-Mixer, kanye ne-Self loading truck Concer Mixer, i-Concrete pump truck, i-concrete yokuxuba ipompo, njll. iqembu le-SITC lilwela ukukhiqiza imishini yokwakha ekhethekile futhi emiswe ngokukhethekile ukuhlangabezana nezidingo zabasebenzisi nabasabalalisi abehlukene.
I-Simply (SITC) ikakhulukazi imikhiqizo ikhombisa kanjena:
1.Skid ukuqondisa Loader
Lolu hlobo lweSkid Loader lufakwe enjini kadizili iKubota. Ukuhlangana okusheshayo kungaqedela ukufaka esikhundleni samathuluzi ahlukahlukene asizayo. Izesekeli zifaka ibhakede, ibhakede lamazinyo, i-mixer, imfoloko, i-mini digger, isando se-hydraulic, i-roller yomgwaqo, i-trencher, umshanelo njll.
2.Concrete mixer imishini
Iqembu le-SITC (Simply) lihlanganisa inqubo yokukhiqizwa kokhonkolo futhi lihlinzeka ngezinhlobo ezahlukene zemishini kakhonkolo ngokuya ngobuningi bobunjiniyela nezidingo zokwakha. Faka imishini kakhonkolo efana ne: Isixubeki, iloli lokhonkolo lokuzilayisha ozimele, ipompo lokuxuba ukhonkolo, iloli lepompo likakhonkolo.
IBackhoe Loader ngumshini wokwakha ohlanganisa izinto eziningi wokumba nokulayisha. Kufanelekile ukumbiwa, ukulayishwa kwamafosholo, ukuthuthwa kanye nokulinganiswa kwesiza. Ingafakwa ibhakede eline-in-one, ifosholo leqhwa, imfoloko, ikhefu, njll. Amathuluzi wokuhlangabezana nezidingo zomsebenzi ezahlukahlukene.
Ama-rollers e-SITC Road angasetshenziselwa ukuminyanisa inhlabathi, imigwaqo ye-asphalt, imigwaqo eseceleni, amabhuloho namakhandlela, izindawo zokupaka izimoto, izinkundla zezemidlalo nezindawo ezincane. Inokudlidlizela okuqondile, amandla amakhulu okuzijabulisa nokusebenza kahle kokuqina. , Imishini ekahle yesikwele.